Shirkada Microsoft oo si rasmi ah ugu dhawaaqday Labada Taleefan ee casriga ah ee Cusub Lumia 950 iyo Lumia 950 XL - BAARGAAL.NET
Shirkada Microsoft oo si rasmi ah ugu dhawaaqday Labada Taleefan ee casriga ah ee Cusub Lumia 950 iyo Lumia 950 XL
✔ Admin on October 06, 2015
Sida la Filaayay Shirkada Microsoft ayaa maanta si rasmi ah u soo bandhigay labadeeda Taleefan ee Cusub ee casriga ah Lumia 950 iyo Lumia 950 XL shir hadda shirkada uga socda caasimada dhaqaalaha Dalka Mareykanka ee New York.
Hadii la eego Naqshada Labada Taleefan ee Lumia 950 oo Lumia 950 XL waxay ku yimaadaan design ay sanadihii la soo dhaafay shirkada microsoft adeegsanaysay ayadoo laga saaray badhanadii hoose oo lagu baday kuwo (Virtual ah ) sidoo kale Shirkada Microsoft ayaa Badhanadii oo dhan dhigtay dhinaca midig ee telefoonada oo ay ku jiraan badhamada audio kan laga daaro iyo sidoo kale button-ka kaamirada .
Intaa waxaa dheer, Shirkada Microsoft ayaa mar kale adeegsatay maadada polycarbonate halkii aluminium ama macdanaha ay isticmaali lahayd.
Marka laga tago naqshadda, Shirkada Microsoft ayaa siisay labada telefoonada Lumia 950 iyo Lumia XL 950 technologiyad sare taas oo ka dhigaysa labadan taleefan taleefanada ugu horumarsan aduunka dhinaca farsamada.
Sida laga soo xigtay Microsoft, wuxuu leeyahay taleefanka Lumia 950 shaashadd 5.2-inji ah processor Snapdragon 808, xusuustiisu tahay 3GB, xasuustiisa dibaduna twaxay dhan tahay 32GB lagu kordhin karo via MicroSD , camera hore oo 5 megapixels iyo 20 megapixels kaamera danbe ah oo taageerta technologyada PureView ,awoodda batarigiisuna waa 3000mAh.
shirkada Microsoft ayaa Sheegtay in labada telefoon Lumia 950 iyo Lumia 950 XL ay awooda Kombuyuutarka kuu soo galinaayaan jeebka haddii aad ku xirtid monitor mouse iyo keyboard.
Ugu dambeyntii, Microsoft ayaa ku dhawaaqday in taleefanka Lumia 950 qiimaha lagu bilaabayo Maraykanka uu ku kici doona $ 549, halka telefoonka kale ee Lumia 950 XL uu ku kici doona , laga bilaabo US $ 649 , iyadoo labada telefoonba diyaar u noqon doonaan iibsiga bisha November.
Halkan Ka daawo Muuqaal xayaysiin ah